Maxaa ku soo kordhay kursiga la boobay HOP103? | KEYDMEDIA ONLINE
Labada kursi ee Hop103 iyo Hop067, ayaa la rumeysan yahay in ay saameyn taban ku yeesheen damicii kuraas boobka ee Kooxda Farmaajo u wajiisheen, Qoorqoor iyo Lafta-gareen.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Federal ee 2020-2021, Maxamad Xasan Cirro, oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Koofur galbeed, ayaa sheegay in ay bilaabayaan baaritaanka doorashadii kursiga HOP103, kaasoo uu cabsho ka gudbiyay Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamad Cismaan Jawaari.
Maxamad Xasan Cirro, wuxuu xusay in ay Baydhabo u tageen la kulanka Madaxweynaha KG, Cabdicasiis Lafta-gareen, iyo Guddiga Heer Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed (SEIT), si loo xalliyo tabashooyinka jira ee doorashada iyo cabshada laga soo gudbiyay kursiga HOP103.
Saddex maalin ka hor, (FIET), ayaa ku wargaliyay Guddiga Doorashooyinka (SEIT) ee Koonfur Galbeed, in la hakiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay Hop103, kadib markii ay soo baxday cabasho ku aaddan habraaca loo maray hannaanka doorashadisa.
Dhawaan Ra’iisul Wasaare, Rooble, ayaa Guddiga Heer Dowlad-goboleed, wuxuu ku amray in aysan qaban karin doorashada kursi aysan shuruudihiisa hubin Guddiyada Heer Federaal, wuxuuna wax laga xishoodo ku tilmaamay habkii ay ku dhacday doorashadii HOP103, ee halkinta lagu sameeyay.
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa xalay kulan arrimahaan diiradda lagu saarayay la qaatay Gudiyada (FIET) heer Koonfur Galbeed (SEIT) iyo Gudiga Xalinta Khilaafaadka, kadib canaantii Ra’iisul Wasaaraha.
Labada kursi ee Hop103 iyo Hop067, ayaa la rumeysan yahay in ay saameyn taban ku yeesheen damicii kuraas boobka ee Kooxda Farmaajo u wajiisheen, Qoorqoor iyo Lafta-gareen, waxaana dhawaan la filayaa inuu soo baxo go’aanka mucaaradka oo ka dhan ah natiijada doorashada.
Dhanka kale, Guddiga Xallinta Khilaafaaadka Doorashada Dadban (GXKHDD) ayaa dhawaan ku dhawaaqay kuna war-galiyay Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Federal (GHDHF) in dacwad laga keenay kursiga sumaddiisu tahay HOP067, kaasoo Dhuusamareeb loogu boobay eedeysane Yaasiin Farey.
Hayeeshee, Guddiga Xallinta Khilafasadka, ayaa la xasuustaa in ay xalaaleeyeen natiijada Doorashada kursiga nambarkiisu yahay HOP239, kaasoo uu isku boqray Ra’iisul Wasaare ku xigeynka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.